Nei Vanhu Vachinyengetera?
Nharireyomurindi | April 2014
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mizo Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | UNOFANIRA KUNYENGETERA HERE?
Unonyengetera nguva dzose here? Vakawanda vanonyengetera, kunyange vaya vasingatendi kuti kuna Mwari. Asi nei vanhu vachinyengetera? Maererano neimwe ongororo yakaitwa muFrance, vanhu vanosvika hafu yevagari vemo vanonyengetera kana kuti vanofungisisa dzimwe nguva “kuitira kuti vangonzwa zviri nani.” Kungofanana nevanhu vakawanda vekuEurope, havanyengeteri nechinangwa chokunamata. Asi “vanongonyengetera kuti vanzwe zviri nani.” Ukuwo, vamwe vanoenda kuchechi vanongonyengetera pavanenge vaine zvavari kuda, vachitarisira kuti Mwari avapindure nokukurumidza.—Isaya 26:16.
Ko iwe? Unofunga kuti munyengetero unongokubatsira kuti ufunge zvakanaka here? Kana uchitenda kuti Mwari ariko, unoona here kubatsira kunoita munyengetero muupenyu hwako? Kana kuti unoona sokuti minyengetero yako haipindurwi here? Bhaibheri rinogona kukubatsira kuona munyengetero senzira inotiswededza pedyo naMwari, kwete kuuona sechinhu chinongoita kuti tinzwe zviri nani.
NYAYA IRI PAKAVHA Unofanira Kunyengetera Here?
BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU Vaipindura Mibvunzo Yose Vachishandisa Bhaibheri!
Thomas Emlyn​—Aimhura Here Kana Kuti Aitsigira Chokwadi?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI Unofanira Kunyengetera Here?
Unofanira Kunyengetera Here?
NHARIREYOMURINDI Unofanira Kunyengetera Here?